Top 10 mobiles an'ny 2017 | Androidsis
Efa amin'ny volana Desambra isika, fotoana tokony hijerena ny taona niainantsika. Hetsika efa zatra matetika manaova lisitra araka izay tsara indrindra amin'ny taona. Ity no hataontsika anio, a fifantenana miaraka amin'ireo finday Android 10 tsara indrindra izay nahatratra ny tsena tamin'ity taona ity. Ho fanampin'izay, ity fifantenana ity dia mety hanome anao hevitra sasany amin'ny fanomezana Krismasy anao.
2017 dia taona iray izay namela anay finday mahaliana indrindra eny an-tsena. Amin'izay mba mifantina finday 10 fotsiny dia somary sarotra. Saingy nahavita nampihena ny lisitra ho lasa finday 10 izahay izay tsy isalasalana fa mendrika ny ho protagonista. Finday inona no nanao an'io lisitra io?
Ny antony mahatonga ireo fitaovana ireo ao anaty lisitra dia maro. Misy ny sasany izay niavaka mihoatra ny ambiny. Na dia tsy ny hifantoka fotsiny amin'ny any ambony ny hevitra, fa avelao miaraka amina fifantina fitaovana tsara izay tena mendrika. Finday inona araka ny eritreritrao no ho ao anatin'ity 10 voalohany ity? Avelantsika eto ambany daholo izy ireo. Na izany aza, zava-dehibe ny ilazana izany mbola tsy nalamina tamina lamina manokana izy ireo.
Atombotsika amin'ny iray amin'ireo ny lisitra flagship an'ny multinational koreana. Samsung dia nanangana fitaovana ambony marobe amin'ity taona ity. Na dia io Galaxy Note 8 io aza no niavaka indrindra. Fitaovana iray niavaka noho ny antony maro. ny famolavolana fampisehoana tsy manam-petra, iray amin'ireo fironana amin'ny taona, dia mandaitra tokoa. Ho fanampin'izay, izy no lasa avo lenta voalohany amin'ny marika ao manana fakantsary roa.
Tsy misy isalasalana, fitaovana mahery vaika izay miasa tsara ary isika mamela sary avo lenta. Hita ao amin'ny a vidin'ny 779 euros.
Huawei dia efa lasa iray amin'ireo marika amidy indrindra sy manandanja indrindra manerantany. Izy ireo koa dia iray amin'ireo fitaovana betsaka indrindra naparitaka teny an-tsena. Tsy isalasalana fa ny iray amin'ireo miavaka indrindra dia ity Mate 10 sy Mate 10 Pro. Ny Huawei Mate 10 dia manana Efijery 5,9 inch ary ny zokiny avy 6 santimetatra. Raha ho an'ny RAM, ny voalohany dia manana 4 GB ary ny iray hafa 6 GB. Samy manana tahiry 64GB ary a Bateria 4.000 mAh. Fitaovana roa manara-penitra izay maneho tsara ny laharam-pahefana avo lenta an'ny Huawei.
Ny Huawei Mate 10 dia misy ao amin'ny a vidin'ny 677 euros. Raha mbola misy ny Mate 10 Pro 730 euros.
Vidio eto ny Huawei Mate 10
Vidio eto ny Huawei Mate 10 Pro
Mety ilay maodely tao amin'ilay lisitra no tena tsy nampoizina ny maro, fa tsy maintsy lazaina fa ilay Ny marika Espaniola dia mamela antsika mobiles tena mahaliana. Io angamba no tsara indrindra amin'ny rehetra. Nanjary lohalaharana izy io. Manana a Efijery 5,2 inch. Mpandrindra no miandry antsika ao anatiny Snapdragon 626 ary GPU Adreno 506. Tsara homarihina ny fakan-tsary 12 MP ao aoriana, mety amin'ny fakana sary amin'ny alina.
Ity fitaovana ity dia amin'izao fotoana izao misy amin'ny vidiny 299 euro ao Amazon. Na dia fampiroboroboana vonjimaika aza izany, ka raha liana amin'ity maodely ity ianao dia maika.
Ny marika sinoa dia iray amin'ireo malaza indrindra eny an-tsena. Tamin'ity taona ity izy ireo dia namela fitaovana marobe ho antsika. Ny iray amin'ireo nalaza indrindra dia ity Xiaomi Mi 6. Manana a Efijery 5,15 inch. Ao anatiny dia manana processeur Snapdragon 835 (ny tsara indrindra amin'ny 2017). Ho fanampin'ny fananana RAM 6 GB ary tahiry 128 GB. Ho fanampin'izay dia misy a 12 + 12 MP fakan-tsary aoriana. Telefaona mahery vaika natao hifaninana amin'ireo marika efa miorina eo amin'ny tsena.
Hita ao amin'ny a vidin'ny 434,39 euros.
Ny lazan'ny Sony eo amin'ny tsenan'ny finday avo lenta dia nihena be, na dia namela antsika finday mahaliana toy ity Xperia XZ Premium aza izy ireo. Fitaovana iray misy Efijery 5,5 inch. Miloka aminao aho Snapdragon 835 amin'ny maha processeur anao ary manana RAM 4GB sy tahiry anatiny 64GB. Na dia tsy maintsy asongadina aza ny fakan-tsariny, noho ny kalitaony sy ho an'ny fiasa fanampiny toy ny Motion Eye na fisamborana mialoha.
Ny finday tsara indrindra antsoina hoe Sony dia hita misy amin'ny 669,31 euro.
Marika iray hafa izay tsy mandalo ny fotoanany eny an-tsena ny LG, na dia mamela antsika hanana fitaovana mahaliana indrindra aza ny firenena marobe Koreana. Nandefa finday avo lenta roa izy ireo tamin'ity taona ity, ny LG G6 sy LG V30. Samy mendrika ny ho ao anaty lisitra izy roa, na dia nisafidy ny faharoa aza. Misongadina amin'izany izy Efijery 6 inch. Miloka amin'ny processeur Snapdragon 835 ao anatiny, miaraka amina RAM 4 GB sy tahiry 64 na 128 GB. Ho fanampin'izay dia misy a 13 + 13 MP fakan-tsary aoriana.
Ny LG V30 dia misy amin'ny a vidin'ny 947,92 euros.
Ity fitaovana ity dia iray amin'ireo zava-nisongadina tamin'ny taona noho ny antony tsotra. Izy ve Telefaona voalohany Xiaomi miloka amin'ny Android One (Android madio). Izy io dia fitaovana tena manokana. Izy io dia manana efijery 5,5-inch. Ao anatiny dia a Snapdragon 625 processeur. Ho fanampin'ny RAM 4 GB ary tahiry anatiny 64 GB. Misy koa a Fakan-tsary 12 + 12 MP ao aoriana.
Ny fitaovana Xiaomi dia misy ao amin'ny a vidin'ny 282 euros.
Orinasa iray hafa izay efa niaina fotoan-tsarotra tamin'ity taona ity, na dia toa nihatsara aza ny raharaha. Izy io no fitaovana tsara indrindra navoakan'ny orinasa Taiwaney hatreto. Manana a Efijery 5,5 inch ary ao anatiny no misy Snapdragon 835 amin'ny maha processeur anao. Manana RAM 4 GB sy fitehirizana 64 GB. Na izany aza, ny tena miavaka dia ny azy fakantsary, heverina ho iray amin'ireo tsara indrindra eny an-tsena. Fakan-tsary 12 MP tokana ao ambadika, fa izany dia eo amin'ny haavon'ny finday fakantsary roa.
Ny HTC U11 dia misy amin'ny a vidin'ny 600 euros.
Iray amin'ireo telefaona farany nahatratra ny tsena. Izy io dia kinova fanavaozana ny haavo ambony navoaka volana vitsivitsy talohan'izay. Ny fiovana lehibe dia amin'ny endrika, satria miloka a efijery tsy manam-petra, izany dia tsy misy frame. Ankoatry ny fananana ny tahan'ny kintana kintana 2017, ny tahan'ny 18: 9. Ny ambiny amin'ny famaritana, izay afaka mamaky eto ianaoSaika tsy niova izy ireo.
Ny kinova fototra an'ny fitaovana (4GB RAM + 64 GB ROM) dia misy amin'ny a vidin'ny 599 euros.
Motorola dia marika iray izay afaka niverina teny amin'ny tsena ary nahita ny toerany. Nisafidy ny hifantoka amin'ny elanelam-potoana izy ireo, miaraka amin'ny valiny tena tsara. Iray amin'ireo findainy tsara indrindra io Moto Z2 Play, an'ny sokajy premium. Manana a Efijery 5,5 inch ary ao anatiny dia manana Snapdragon 626 amin'ny maha processeur azy. Izy io dia manana RAM 4GB sy tahiry 64GB. Ankoatry ny fananana a Fakan-tsary 12 MP aoriana. Amin'ny ankapobeny, fitaovana iray tena feno izay manome antoka ny fandidiana tsara.
Hita ao amin'ny a vidin'ny 343,99 euros.
Izany dia ny finday Top 10 an'ny 2017. Ny hevitra dia ny hanana kely ny zava-drehetra, na dia antenaina aza, ny ankamaroan'ny fitaovana dia avo lenta. Betsaka ny telefaona hafa mendrika asongadina, saingy 10 fotsiny no tsy maintsy nofidina. Manantena izahay fa nahaliana anao ity lisitra ity ary manome anao hevitra rehefa manavao ny findainao. Ahoana ny hevitrao momba ity finday Top 10 ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Telefaona 10 ambony amin'ny 2017